Mandrimandry… miandriandry fanairana | NewsMada
Mandrimandry… miandriandry fanairana
Par Taratra sur 02/12/2021
Misy ny mandrimandry manana aretina amin’izao? Tsy inona fa ny fanaovan’ny valanaretina Covid-19 tampody fohy, efa mila hirongatra aza amin’ny faritra sasany. Nefa misy ihany ny tsy mahalala? Na tsy maharaka, na tsy miraharaha… Tsy hita hovisavisaina sy hotanisaisaina intsony amin’izany ny tsy fanarahana fepatra sakana ara-pahasalamana eny rehetra eny: an-dalambe, an-tsena, anaty fiara…
Tsy ny noho ny tsy fiambenana sy tsy fitandremana amin’ny antsipiriany sy manontolo izay fepetra sakana tsy hahazoana sy ny tsy hiparitahan’ny aretina izay no anisan’ny mampahazo vahana azy indray? Na ny tsy fanaovana arovava-orona io, na ny tsy fanasan-tanana matetika amin’ny rano sy savony na amin’ny tsiranoka famonoana tsimokaretina, na ny tsy fanajana ny elanelana iray metatra…
Iaraha-mahafantatra sy hita fa tsy mbola foana na resy tosika ny aretina… tsy hita maso. Nefa misy ihany ny minia manao tandrevaka. Nahoana? Na revo sy difotra loatra amin’ny fiatrehana fiainana andavanandro ny sasany, ka hadino na atao tsirambina ho azy mbamin’ny fitandroana fahasalamana… Ny vola, hono, Ramangamitahy, ny aina Ramangatahina. Ilaina mandrakariva ny mitandro ny aina.
Tsy mbola fomba fiaina ny fitandroana fahasalamana sy ny fiarovan-tena ho fiarovana ny hafa koa, na efa nandripaka olona aza io areti-mandoza io? Mety mbola hanao ny ataony amin’izao fiovaovany tsy hita hofaritana na ferana izao. Miditra amin’ny andiany fahatelo i Madagasikara? Mila fanadihadiana sy fampahafantarana. Any amin’ireo firenen-dehibe sasany, efa andiany fahadimy izao.
Sanatria, inona no andrasana vao ho taitra, hiaro tena, hitandrina? Mandrimandry manana aretina miandriandry fanairana, fampahatsiahivana, fampitandremana, fanasaziana… Na miandry ny fepetra amin’ny hamehana ara-pahasalamana vao hiropaka? Nefa mbola misy ny azo atao tsy hiverenana amin’izany. Tsy aleo misoroka amin’ny fitandremana dieny izao toy izay hitsabo amin’ny fepetra mafy?